Ptengine: Maapụ Okpomọkụ, Mgbasa Ozi, Ntugharị Ntugharị na Nchịkọta | Martech Zone
Ọ bụ ezie na ọtụtụ nchịkọta nyiwe na ahịa bụ foduru nke teknụzụ nke gafere afọ iri abụọ, teknụzụ ọhụụ na-elekwasị anya na omume onye ọrụ na nyocha ntughari ntụgharị. Heatmaps bụ ụzọ zuru oke iji hụ otu ndị ọrụ si emekọrịta oge na nhazi saịtị gị, igodo na oku na-eme. ptengine awade a collection of ngwaọrụ wuru kpọmkwem maka ihe mgbaru ọsọ ndị a.
Nyocha Map nke Okpomọkụ - Tụlee okpomoku dị n’etiti ibe dị iche iche, oge na ngalaba na-akparaghị ókè iji were anya nke uche hụ ụdị omume ọbịa dị iche iche.
Pịa Heatmap - Jiri nlele onyonyo jiri anya nke uche wepụta ihe, na-enye nghọta ngwangwa ma dị mfe banyere agwa ndị ọbịa.
Ntị Heatmap - Ihe anakọtara na-enye ihe akaebe banyere ebe ndị ọbịa na-elekwasị anya karịa, na-enyere aka ịchọpụta nhazi mgbasa ozi kachasị mma, na-enye ozi dị mkpa mgbe ị na-emepụta ma na-ahazigharị peeji nke ọdịda, na-ebelata ịzụ ahịa ịzụ ahịa, na-ebuli mgbanwe nke ụdị ịntanetị, ma na-ebu amụma otú ndị ọbịa ga-esi jiri ebe nrụọrụ weebụ gị n'ọdịnihu .
Multi-Ngwaọrụ nlekota oru - egwu ma nyochaa data site na ngwaọrụ niile na saịtị na-akwado saịtị wuru na nzaghachi imewe.
Nyocha peeji - ngwa nyocha siri ike iji nakọta ọnụ ọgụgụ nke clicks site na mmekọrịta na mmekọrịta na-abụghị mmekọrịta. Agbanyeghị ihe mmewere, nweta nghọta na ọnụ ọgụgụ clicks na bọtịnụ gị, onyonyo, vidiyo, wedaa menus na ndị ọzọ.
Pịgharịa Gaa Map - machie pịa na nlebara anya iji nye pasent nke ndị ọbịa na-agagharị na ngalaba ụfọdụ nke ibe gị. Nweta nghọta zuru oke banyere ihe kpatara ndị ọbịa gị na-ahapụ ozugbo ha rutere na weebụsaịtị gị.
Nchịkọta Otu - Iji Egwuregwu Isi, Egwuregwu Ọgwụ, Egwuregwu Kachasị, na Regex, Ptengine na-enye ụzọ dị iche iche iji nyochaa peeji ndị nwere akụkụ dị iche iche, dịka akpụkpọ ụkwụ nwere agba dị iche iche, ụgbọ ala nwere ụdị dị iche iche, isiokwu ndị edemede dị iche iche, ọdịda peeji nke nwere URL dị iche iche. Chekwaa oge eji emegharị URL dị adị.
Campaigns - mepụta mkpọsa URL (ma ọ bụ dakọtara ndị dị na ya), ma nyochaa okporo ụzọ site na aha, isi mmalite, ọkara, okwu, na ọdịnaya.
Ihe ntụgharị ntughari - Mụta ebe na ihe kpatara ndị ọbịa ji kwụsị nleta ha, yana otu ha si agagharị na webụsaịtị gị. Tinye Okpomọkụ Ptengine nchịkọta gaa na Ntugharị Ntugharị gị ma gbanwee ndị ọbịa n'ime ndị ahịa.
Ezigbo Oge Nleta Ọbịa - nakọta data na okporo ụzọ onye ọrụ n'otu oge, na-enyere gị aka ịme mgbanwe ahịa ngwa ngwa ma dị irè.
Nchịkọta maka nyocha ala - N’oge n’ezie, kpọọ ndị ọrụ aha ebe dị iche iche
Nkọwa ndị ọbịa - nyochaa data niile dị oke mkpa nke ndị ọbịa na-aga n'otu oge, dị ka mmemme, igodo ọdịnaya, sistemụ arụmọrụ, ihe nchọgharị weebụ, na peeji nke ozi.
Tags: ntị mapnlebara anyapịa eserese ọkụpịa okpomokunchịkọta map ọkụmap ọkụokpomokuptengine
The Best Ahịa nnweta Strategies Online